चीनमा सबै भागहरू खरीद गर्दै एउटा आईफोन ss भेला गर्नुहोस् आईफोन समाचार
चीनमा सबै भागहरू किन्न आईफोन ss जम्मा गर्नुहोस्
पक्कै पनि एक भन्दा बढी कहिल्यै सबै कम्पोनेन्टहरू किन्नुहोस् र यसलाई जम्मा गरेर तपाईंको आफ्नै आईफोन सिर्जना गर्ने सम्भावनाको बारेमा सोचेको छ, विशेष गरी जब ती रिपोर्टहरू देखा पर्दछन् कि आईफोनको बारेमा दाबी गर्छ कि about २ costs० को लागत छ यदि हामी यसको प्रत्येक भागको मान व्यक्तिगत रूपमा थप्छौं भने। ठिक छ, त्यहाँ कोही छ जो यस बारे मात्र सोचेन तर प्राप्त गरीयो। यो स्कटी एलन हो, सफ्टवेयर इञ्जिनियर, जसले चीन गएका सबै आवश्यक भागहरू लिन आईफोन s एस भेला गर्न सफल भए। पूर्ण कार्यात्मक, र उसले हामीलाई भन्छ यस भिडियोमा।
साहसी साहसीले पोष्ट गरे कि आफैंको आईफोन निर्माण गर्न सबै आवश्यक कम्पोनेन्टहरू प्राप्त गर्ने ओडिसी पछि सन्तुष्ट भए। उनले आईफोन for एसको लागि छनौट गरे किनभने त्यसका लागि सबै कम्पोनेन्टहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुने थियो, र त्यो भए पनि यो सजिलो थिएन। कार्य चीन यात्रा गर्नु भएको थियो र बजार खोजी गर्नुपर्‍यो सबै भाग Huaqiangbei। केही उसले कुनै समस्या बिना नै हासिल गर्न सक्षम भयो, तर अरूले विक्रेताहरूको सहयोग आवश्यक पर्दछ जसले Scotty सँगसँगै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछन्। मदरबोर्ड फेला पार्न सबैभन्दा गाह्रो अंश थियो।
अन्तिम परिणाम टचआईडीको साथ पूर्ण रूपमा १6जीबी भण्डारण आईफोन s एस थियो। तपाईको आईफोन s को खर्च कति भयो? दुर्भाग्यवश मलाई थाहा छैन फिगर धेरै लाई यो उपलब्धि दोहोर्याउन प्रोत्साहित गर्दछ, किनभने स्कट्टी भन्छन् कि उनले आईफोनमा करीव $ १००० खर्च गरे, चीनको यात्रा वा खोजी वा आरोहणमा बिताएको समय गन्ती गरेन।। टुटेका भागहरू, उपकरणहरू, र कम्पोनेन्टहरू जुन तपाईंलाई अन्तमा चाहिएको थिएन त्यसैले आईफोनको मूल्य आधिकारिक मूल्यभन्दा अझ बढी भएको कारण हो। सबै चीजको बाबजुद पनि, उनले चीनमा उनको साहस देखाउने भिडियो हेर्ने लायक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » हाम्रो बारेमा » चीनमा सबै भागहरू किन्न आईफोन ss जम्मा गर्नुहोस्
र तिनीहरू अझै पनि विश्वास गर्छन् कि यस ग्रहमा बौद्धिक जीवन छ ...।
टोनी सी भन्यो
टर्कीले केहि पनि सवारी गरेको छैन। उसले केवल भागहरू किनेको छ र चिनियाँहरूले यसलाई भेला गरे। यसको श्रेय तिनीहरूको हो, कुनै श .्का बिना। तिनीहरूसँग बुलबुलेहरू हटाउनको लागि अटोक्लेभ पनि छ। केही क्र्याक्स यो यस्तो देखिन्छ कि म कारको लागि केहि टायरहरू किन्छु र मँ सडकमा म्याक्निकमा जान्छु तिनीहरूलाई माउन्ट गर्नका लागि।
टोनी सी लाई जवाफ दिनुहोस्।
यदि तपाईं १ minute मिनेट भन्दा पर हेर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ आफैं नै हुनुहुन्छ जो सबै टुक्रा जम्मा गर्दछ। केवल पर्दा र मदरबोर्ड स्पष्ट कारणहरू भन्दा बढी भेला हुनुपर्‍यो, बाँकी तत्वहरू उहाँद्वारा भेला भएका थिए।
कम्तिमा मेरो रायमा मेरिट यति धेरै असेंब्ली होइन, तर आईफोनको सबै तत्वहरू बजारमा प्राप्त गर्दै।
त्यो मात्र होईन, यो यो पनि हो कि टच आईडीले काम गर्न सक्दैन, र भिडियोमा यो भन्छ कि यो गर्दैन, न त यो यस्तो गरीरहेको छ। टच आईडी प्रोसेसरसँग जोडिएको छ, जबसम्म यसले एउटै आईफोनबाट दुवै टुक्रा फेला पार्दैन, केही पनि होइन। हामी हेरौं कि यदि हामी राम्रा फेला पार्यौं भने, कि यो पृष्ठमा तपाईं एप्पल विज्ञहरू हुनु पर्छ।
तपाईले भनेको जस्तै, जानकारी दिनु अघि हामी यो निश्चित छौं कि यो सहि छ, र हामीले त्यसो गरेका छौं।
«यो टच आईडी सेन्सरको साथ आयो, किनकि प्रोसेसर र टच आईडी सेन्सर क्रिप्टोग्राफिक जोडी भएका छन्। यसको मतलब यो छ कि टच आईडी अब काम गर्दैन यदि तपाईं टच आईडी सेन्सर बदल्नुभयो »
यो पाठ आफै मुख्य चरित्रबाट आएको हो। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो केहि चीज हो जुन उसले ध्यानमा राख्यो।
अरू कसैलाई जानकारी प्राप्त गर्न सिफारिस गर्नु भन्दा पहिले हामी राम्ररी सूचित गरौं ... हेरौं यदि हामी पाठ दिन चाहन्छौं भने हामीले एउटा उदाहरण सेट गर्नुपर्नेछ।
यो हप्तामा मैले देखेको सबैभन्दा अनौंठो चीज हो, यसमा मैले कुनै पनि उपयोगी चीज देख्दिन यदि लागत पहिलेभन्दा बढी जम्मा गरेको भए भन्दा बढी छ। उसले कुन गुणको आनन्द लिन सक्छ?
फिलिपोलाई जवाफ दिनुहोस्
वेबसाइट जुन तपाईंको लक कोड प्राप्त गर्न सक्दछ र कसरी एप्पलले यसलाई फिक्स गर्दछ
सबै २०१ iP आईफोनमा लाइटनिंग र GB जीबीको र्याम हुन्छ